ရင်ထဲခံစားမိသော ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံ…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ရင်ထဲခံစားမိသော ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံ….
Posted by ပိုင်လေး on Jan 16, 2012 in Copy/Paste | 31 comments
သရက်မြို့ခံ အဘွားအိုတဦးမှ ကိုမင်းကိုနိုင်ကို ဆိုက်ကားနဲ့ အမှီလိုက်ကာ လှိုက်လံနှုတ်ဆက်ပြီး၊ လက်ဆောင်ထုတ်ကလေး ပေးတဲ့ မျက်ရည်ဝဲဖွယ် မြင်ကွင်းလေးပါ…။ နှစ်ဦးစလုံးရဲ့ မျက်နှာပေါ်က မြင်ကွင်းတွေ အဓိပ္ပါယ်တွေ ရသတွေ အများကြီး ဖော်ဆောင်နေပါတယ်…။ အမေအိုရဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်အပေါ် ထားတဲ့ မေတ္တာနဲ့ ချစ်ခင်အားကိုးမှုတွေကို မျက်ဝန်းမှာ မြင်နိုင်ပါတယ်ဗျာ…။ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ ဘဝတွေကို ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေရမယ် ဆိုတာကတော့ အမေ့အိုရဲ့ အသွင်အပြင်ကို ကြည့်ပြီး ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်…။ သားရယ် အမေတို့ရဲ့ ဘဝအမောတွေကို ကယ်တင်ပေးပါလို့ ဆိုနေသလား၊ ငါ့သားလေးကို အားကိုးပါတယ်လို့ ဆိုလေမလား၊ အများအကျိုးအတွက် အနစ်နာခံ၊ စတေးခံ လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ ငါ့သားလေး ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာပါစေလို့ ဆိုနေသလား…။ အမေတွေနဲ့ ဝေးနေရတဲ့ ကျွန်တော်တို့တွေအတွက် ခံစားချက်တွေနဲ့အတူ လားပေါင်းများစွာ မေးခွန်းတွေပေးနေတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးပါ။ မုန့်ထုပ်လေးဟာ တန်ဘိုးမရှိလှပေမယ့် အမေအိုရဲ့ မေတ္တာမျက်ဝန်းကတော့ အင်မတန်မှ တန်ဘိုးကြီးမားလှပါတယ်..။ အမိမြန်မာပြည် အနှံအပြားက ဒီလိုအမေအိုတွေရဲ့ ဘဝအမောတွေ အေးချမ်းစေချင်ပါပြီ…အေးချမ်းစေချင်ပါပြီ… အေးချမ်းစေချင်ပါပြီ………………………
ရင်ထဲမှာ နင့်နေအောင် ခံစားရတယ် အဲဒီမုန့်ထုပ်ကလေးထဲမှာ အခြေခံလူတန်းစား အားလုံးရဲ့ ယုံကြည်အားကိုးစားမှု၊ မျှော်လင့်ချက် နဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရပါဘူး။
ဓာတ်ပုံ ပိုင်ရှင်ကတော့ ဒီမိုဝေယံမှ Jpaingပါ…။
ဒီအဖွားရဲ့ မလိုင်လုံးထုပ်လေး (ထင်ပါရဲ့) က ကိုမင်းကိုနိုင် အတွက် တစ်သက်စာအင်အား ဖြစ်သွားမှာပါ။
ကျွန်မလဲ အဲဒီပုံလေးကြည့်ပြီး ကြက်သီးထ၊ မျက်ရည်ဝဲ မိပါတယ်။
အာဏာ၊ ပါဝါ နဲ့ လူထုချစ်ခြင်းကို မရပါဘူး ဆိုတာရယ် …ဒါဟာ အတုယူသင့်တယ် ဆိုတာရယ် ….
ဘယ်သူမဆို စေတနာမှန်ရင် ဒီလိုချစ်ခြင်း၊ အားကိုးယုံကြည်ခြင်းတွေ ရမှာမလွဲပါဘူး။
အဲဒီလိုပီတိ မျိုးကို ရဖို့ကြိုးစားကြည့်ကြပါ၊ အားကျကြစမ်းပါ လို့ဘဲ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
ပုံလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ BOC ရေ။ :-)
လူထုရဲ့ဘ၀အမောတွေ ပြေပြောက်ဖို့ ရောင်နီလေးတော့ပျို့လာပြီ၊ နေလုံးကြီးလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် ထွက်လာဖို့ ဘယ်လောက်များစောင့်ရဦးမလဲ
သမ္မတကြီးမင်းကိုနိုင် သက်တော်ရာကျော် ရှည်ပါစေ…။ သူသမ္မတဖြစ်ရင် ငါ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးလုပ်မယ်။ အင်တာပိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရဲအဖွဲ့မှာ ဇိမ်ဘုန်းဂျီးဦးခိုင်ကို ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြီး ကမ္ဘာအေးသာသနာ့လှိုဏ်ဂူမှာ ပိဋကတ်သုံးပုံကို အလွတ်ကျက်ခိုင်းထားမယ်။
ဟုတ်တယ်။ မတွေးမိဘူး။ ကိုမင်းကိုနိုင် သမ္မတ ဖြစ်နိုင်တာပဲ။
တကယ့်ကို ခံစားရတဲ့ မြင်ကွင်းလေးပါ
ရင်ထဲကို အရှိန်နဲ့ ၀င်ဆောင့်တဲ့မေတ္တာရဲ့ wave၊ ကြောက်ပါပေ့ဗျာ………..
ခုနောက်ပိုင်းသတင်းသမားတွေ၊ ကင်မရာမန်းတွေအရမ်းတော်တာဘဲ လူတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုထိထိ
မိမိ ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်။အနစ်နာခံရကျိုးနပ်ပါစေ ကိုမင်းကိုနိုင်။အမေစုနဲ့လက်
မျက်ဝန်းထဲမှာမျှော်လင့်ချက်တွေ၊အားကိုးမှု့တွေတွေ့နေရတယ်။ ဒီလိုပုံရဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်ခဲ့ရတာ။ စောင့်ရကြိုးနပ်တော့မယ်ထင်ပါတယ်။
ရင်ထဲကို လာထိတဲ့ပုံလေးပါ ပုံလေးကိုကြည့်နေရင်းမျက်ရည်တွေဝဲမိပါတယ်
လူတိုင်းမလုပ်နိုင်တာတွေကို လုပ်နိုင်ခံနိုင်ခဲ့လို့ ခုလို စူပါပါဝါကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရရှိတယ်လို့သာ….
ရင်ထဲ့မှာ ဆို့နင့်ပြီး မျက်ရည်တောင် ၀ဲလာပါတယ်
88 က သွေးတွေကိုယ်ထဲမှာ ပုန်းခို စီးဝင်နေစဲပါလာကွယ်
ဒါကတော့ နာမည်ကြီးသူတစ်ယောက်ရဲ့မြင်ကွင်းလေးပေါ့။ နာမည်မကြီးပဲနဲ့ အများအတွက် ၀င်သွားကြတဲ့သူတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ။ ဒီလူတွေကော ငြိမ်းချမ်းကုန်ကြပြီလား….. အတွေးပွားစရာတွေ များလှပါတယ်။ သူတို့လေးတွေရဲ့ဘ၀တွေကိုလည်း နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုသင့်ပါကြောင်း……
ပုံလေးအတွက်ကျေးဇူးပါ BOC ရေ…
ပုံလေးကို ကြည့်ရင် စိတ်ထဲ တစ်ခုခုစီးဆင်းသွားသလိုပါပဲ
မြင်ကွင်းလေးက ကြည့်ရတဲ့သူအတွက် ရင်နင့်စရာပါ …….
အားပါး ဒီပုံကတော့တချိန်မှာသမိုင်းဝင်သွားနိုင်လောက်ပါတယ်ဗျာ ..
ရင်ထဲမကောင်းဘူး …။ ၀မ်းနည်းဝမ်းသာကြီး။
လူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်၊ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒ ပြည်သူလူထုက ဘယ်လိုလူတွေကိုယုံကြည်အားကိုးသလဲဆိုတာ…
လမ်းပေါ်မှာ အသံချဲ့စက်တင်ပြီး ခင်ဗျားတို့ကို ဘာပေးပါမယ်၊ညာပေးပါမယ်၊လမ်းခင်းပေးပါ့မယ်ဆိုပြီး..အော်ဟစ်ပြစရာမလို..တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချိန်းဆက်ပြီးလူစုစရာမလိုပဲ…မိမိတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အသိစိတ်နဲ့ကြိုဆိုကြတယ်ဆိုတာ…အားလုံးအသိပါပဲ…
ဒါဟာ ညီညွတ်ချင်း၊ ခိုင်မြဲတဲ့စိတ်ဓါတ်တွေကိုဖေါ်ပြလိုက်တာပါပဲ…
တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံပါ…..။ ပြည်သူတွေဟာ ဘယ်လိုလူတွေကိုသာ အားကိုးမျှော်လင့်ကြတယ်ဆိုတာကို ကြည့်ရုံနဲ့တင် သိသာသွားနိုင်လောက်အောင် ခံစားမှု ရသကို ဖော်ထုတ်ပေးလိုက်သလိုပါပဲ။
ဒီအဖွားကိုကြည့်ရတာ နွမ်းပါးမယ့်ပုံပေါ်တယ် … တတ်နိုင်တာလေးမေတ္တာ လက်ဆောင်ပေးတဲ့ပုံက လေးစားတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ရင်းမှန်လေးပါ ပေါ်လွင်သွားတယ် … ။
သူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ရင်း စိတ်တောင်မကောင်းသလိုပဲ …. ဓါတ်ပုံကြည့်ရင်း ကြက်သီးမွှေးညှင်းထမိတယ် …. ။
ကိုမင်းကိုနိူင်သာ သမ္မတ နေရာကို ပေးအပ်ခံရမည်ဆိုပါက ( လုံးဝ ) ထိုက်တန်သူ ဖြစ်ပါကြောင်း
ထောက်ခံအပ်ပါတယ် . . . ။
အဘွားအိုမျက်နှာမှာတွေ့ရတာ ရိုးသားမှု ၊ ဟန်ဆောင်မှုကင်းလိုက်တာ …ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့၊ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ကို ပြည်သူတွေချစ်တယ်ဆိုတာ ပေါ်ပြူလာဖြစ်ချင်ရုံသက်သက်မဟုတ်ပါ…. ပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာ လူကောင်းနဲ့လူဆိုး ခွဲခြားသိနေနိုင်လို့ပါပဲ